Guurka dhallaanka aan qaangaarin oo caqabad ku ah degmooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guurka dhallaanka aan qaangaarin oo caqabad ku ah degmooyinka
La daabacay måndag 18 januari 2016 kl 13.58
Sawir laisku aadiyey hayadda bulshada iyo gacmo is guursanaya. Sawirle: Patrik Lundin / TT, Bertil Ericsson / TT
Qaxootigii faraha badnaa ee dalka dhowaantan soo galey ayey qayb ka ahaayeen qooysas aan weli qaan gaarin labaduba ama mid ka mid ah, waana tiro aad uga badan marka loo barbar-dhigo middii Sweden lagu yiqiin ee dhallaan qoys ah oo aan qaan-gaarin.
Laanta wararka ee Ekot oo la hadashay maamullada lix degmo ayay tirada laga hadleyaa gaarsii-san tahay 70 dhallaan, hase yeeshee ey jiri karaan tiro intaa ka sii badan.
Inkasta oo uu xeerka dalka Sweden mamnuucayo guurka shakhsi aan gaarin da’dii qaan-gaarka ayay haddana degmooyinku marar badan u ogolaadaan inuu dhallaan meel la dego oo la noolaado saygiisa oo dhaafay da’dii qaan-gaarka.
Degmada Stockholm ayaa ka mid ah degmooyinka ogolaada falalka noocaasi ah, halkaasina oo ay sarkaaladda lagu magacaabo Liselotte Tronders ay ka tahayagaasime waaxeed laanta bulshada ee degmada Stockholm.
– Haddii ay suurtagal tahay ma ahan iney wada degaan, qaaasatan haddii da’du aad u yar tahay, laakiin waxaa dhici karta iney yihiin laba dhallin-yaro oo aan qaan-gaarin oo is qaba, marka miisaan guud lama wada saari karo.
Ekot – laanta wararka idaacadda oo xiriir la smeeysay lixda degmo ee qaxootiga lagu meeleeyo kolka ugu horreeysa oo ey dalka soo galaan, halkaasina lagu qaabiley dhallaan fara badan oo keli-nimo dalka ku yimid, isla-markaasna ey ka mid yihiin dhallaan qooysas ah, tiradaasina lagu qiyaasay 70, hase yeeshee aan weli la heyn tira-koob dhab ah loona maleeyneyo in tiradu intaa ka sii badan tahay.
Gabdhahan ayey da’doodu u dhexeeysaa 15 – 17 jirro, hase yeeshee ay laanta wararka Ekot dhanka kale war-bixinno ku heshay iney jiraan hablo da’doodu gaarsii-san yihiin 13 – 14 jirro. Iyo sidoo kale qaar badan aan badneyn oo wiilal ah.
Haddaba kolka ilma aan qaan-gaar aheyni uu yiraahdo waxaan ahay xaas waxaa hoowshaa faraha la gala hayadda adeegga bulshada, middaasina oo baaritaan ku sameeysa, isla-markaana go’aan ka gaarta in dhallaankaa loo ogolaado inuu la dego saygeeda iyo in kale. Inta badan waxay shaqaale ka socda hayadda adeegga bulshadu la kulantaa dhallaanka oo wareeysi la yeelataa. Haddii marka ilmahaasi yiraahdaan waxaannu dooneynaa inaan la noolaado shakhsiga ey isu dhaxaan way adag tahay marka in badan laga qabto, sida ay sheegtay Liselotte Tronders oo ka howl-gasha laanta heeganka ee hayadda bulshada Stockholm.
– Kolka aan ruux khasbeeyno waxannu u baahannahey inaannu gacan ka helno. In masuuliyad laga qaado oo meel lagu soo xiro. Mana ahan arrin u sahlan oo keliya in la yiraahdo laguuma ogola inaad shakhsigaa la noolaato oo la is dhageeysaneyo.
Shan ka mid ah lixdii degmo oo Ekot xiriirka la sameeysay ayaa sheegay in mar haddii ilmaha da’doodu kor u dhaafeen 15 sannadood oo ey yiraahdaan waxaan dooneynaa inaan la noolaanno cidda aannu is qabno inta badan loo ogolaado, inkasta oo uu xeerka waddanku mamnuucayo guurka cid aan qaan-gaarin, waa da’da 18 sannadood.
Degmo iyadu arrinkaa si kale u qiimeysay ayaa ah degmada Göteborg. Sannad ka hor ayay laanta wararka Ekot oo barnaamij ka sameeysay gabar 14 jir ah iyo ninkeedii oo 21 jir ah oo hooy la wada dejiyey. Wixii intaa ka dambeeyay ayuu maamulka degmada Götebrog go’aansaday in la kala kaxeeyo mar haddii ey ka yar yihiin 18 jir, sida ay sheegtay Therese Sammels, ahna sarkaaladda masuuliyadda uga ah degmada Götebrog qaabiladda dhallaanka keli-nimada ku yimaada.
– Shakhsiga ay da’diisu ka hooseeyso 18 ayaa la dejiyaa goob ku meel gaar ah oo dhallaanka loogu talo galay halka cidda qaan-gaartayna ay hayadda socdaalku la wareegto si ay u meeleeyso.
Sideey idiinku shaqeeysaa?
– Si wanaag-san ayay noogu shaqeeysaa. Dhibaato weyn kalama kulanno kolka aannu u sharaxnno sababta aannu tallaabadaa u qaadeyno iyo in xeerka Sweden uu dalkan ka jiro.
Dooddan ayaa hor-seeday in qaar ka mid ah siyaasiyiintu faallo ka bixiyaan, iyadoona uu markii ugu horeeysay ka Hadley hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna, Jan Björklund. Isagoona sheegay in loo baahan yahay in dawladdu amuurtan ka saarto guddi gaar ah ee caqabadaha:
- Waa wax lala yaabo in degmooyin badani sheegeen iney xeerka dalka jebiyaan. Dalka ma waxaa ka shaqeeynaya xeerka Sweden mise, sida uu hadalka u dhaigay Jan Björklund.